यस्ता छन् लक्षण,माहामारी बन्दै ‘स्वाइन फ्लू बाट कसरी बच्ने ? - Nepal News - Latest News from Nepal
यस्ता छन् लक्षण,माहामारी बन्दै ‘स्वाइन फ्लू बाट कसरी बच्ने ?
काठमाडौं, साउन २२—पछिल्लो समय काठमाडौंमा स्वाइन फ्लू माहामारी रोगकोे रुपमा देखा परेको छ । स्वाइन फ्लूका कारण पछिल्लो दुई सातामा उपत्यकामा मात्रै आधा दर्जन भन्दा बढीको मृत्यु भएसकेको छ भने देशभरीमा एक दर्जनले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
ज्वरो आउने, घाँटी दुख्ने, सुक्खा खोकी, रुघा, खाना नमिठो हुने र पखाला लाग्नेजस्ता लक्षण देखिएर अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीमा स्वाइन फ्लूको भाइरस ‘एच वान एन वान’ भेटिएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुले जनाएका छन् ।
केही सातादेखि काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न ठाउँका अस्पतालमा मौसमी रुघाखोकीका बिरामी बढेका छन् । स्वाइन फ्लू बर्खाको सुरुवात र जाडोको अन्त्यतिर बढि देखिने गरेको छ ।
के हो स्वाइनफ्लू रोग ?
स्वाइन फ्लू भाइरसबाट सर्ने सरुवा रोग हो । अहिले यो भाइरस संसारका करिब दुई सय देशमा फैलिसकेको छ । पहिला पहिला पनि देखा पर्ने गरेको भएपनि यो सन् २००९ मा मात्र विश्वव्यापी भएको हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसलाई सामान्य मौसमी रुघाखोकीका रुपमा सन् २०१० मा प्रमाणित गरेपछि यसको नाम एचवान एनवान भाइरसको संक्रमणबाट सर्ने सरुवा रोग भएको हो ।
भाइरसबाट सर्ने रोग भएकाले यसको प्रभावकारी उपचार र औषधी छैन । सुरुमा सुँगुरबाट फैलिएको हुनाले कतै कतै यसलाई सुँगुर ज्वरोसमेत भनिन्छ । चिकित्सकले यसलाई सामान्य रुघाखोकी बताउँदै आएका छन् । स्वाइन फ्लू पनि अन्य मौसमी रुघाखोकी जस्तै सामान्य भएकाले आत्तिनुनपर्ने स्वास्थ्यकमीहरु बताउँछन । तर, आफू सर्तक भने रहनु पर्ने हुन्छ ।
विशेष गरी रुघाखोकीलाई ३ समूहमा बाँडिएको छ । समूह ए,समूह बी र समूह सी । यी समूह मध्ये ए र बी बढि संवेदनशील मानिन्छ ।रुघाखोकी अन्र्तगत समूह एमा अहिले नेपालमा २ वटा भाइरस सक्रिय छन् । एचवान एनवान र एचथ्री वानटू । यी भाइरस सधैं एकै क्षेत्रमा भने देखा पर्दैनन् । कहिले कुन ठाउँ कहिले कुन ठाउँमा सक्रिय हुने गरेका छन् ।
रुघाखोकीको अर्को समूह बी पनि संवेदनशील मानिन्छ । यसबाट कहिलेकाही प्रकोप नै देखा पर्न सक्छ । तर समयमै बिरामीको उपचार भएको अवस्थामा रोग निको हुन्छ । स्वास्थ्य संस्थामै यसको उपचार संभव भएको कारण यसबाट हुने मृत्युदर न्यून रहेको हुन्छ ।सी समूहको रुघाखोकी भने सामान्य मानिन्छ । यो सामान्यतया २र३ दिनमै निको हुने भएकाले चिकित्सकहरुले यसलाई समान्य मान्ने गरेका छन् ।
कसरी फैलिन्छ स्वाइन फ्लू ?
सुँगुरबाट मानिसमा सरेको हुँनाले घरपालुवा जनावर र सुँगुरको सम्र्पकमा रहनेमा भाइरस सर्ने संम्भावना बढि हुन्छ । हावाको माध्यमबाट पनि प्रभावित रोगी व्यक्तिबाट अर्को निरोगी व्यक्तिमा सर्न सक्छ । रोगीले खोक्दा, हाछ्युँ गर्दा किटाणु फैलिन्छ । साझा रुमाल, रेलिङ, रिमोर्ट, सवारीसाधनका समात्ने ठाउँहरुमा पनि भाइरस हुन सक्छन् जुन व्यक्तिको सम्र्पकमा आउँनाले सर्न सक्छ ।
यस्ता छन् यसका लक्षण
स्वाइन फ्लूका लक्षण रुघाखोकीसँग मिल्दो जुल्दो नै हुन्छ । लगातार नाकबाट पानी बगिरहने हुन्छ । लगातारजसो हाछ्युँ आउँछ । शरिरमा कमजोरी, आलशयता, औषधी सेवन गरेपनि विरामीमा खोकी बढ्नु, घाँटी चिलाउनु, दुख्नु, गम्भीर अवस्थामा भने चलिरहेको शरिरको कुनै कुनै अंगले काम नगर्नु र अन्त्यमा विरामीको मृत्युसमेत हुन सक्छ ।
अन्य साधारण रुघाखोकीका विरामीले ३र४ दिन आराम गरे निको हुने भएकाले आराम गरे मात्र पुग्छ । बालबालिका, बुढाबुढी र दिर्घरोगका बिरामीमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुने हुँदा संक्रमणको जोखिम बढी हुन्छ ।
स्वाइन फ्लूले विशेष गरी मुटु, कलेजो, मृगौला, छातीको रोग भएका, मधुमेह, एचआइभी एड्स रोग लागेका, बढी रक्सी पिउने, गर्भवती, बढि मोटोपना भएका विरामीलाई असर गर्ने चिकित्सकले बताएका छन् । यो रोग लाग्दैमा ज्यान जान्छ भन्ने होइन तर यस्ता विरामीले बढि सचेत बन्नुपर्छ ।
कुन सिजनमा सर्ने बढी सम्भावना हुन्छ ?
नेपालमा स्वाइन फ्लू दुई सिजन भदौ र असोज तथा फागुन चैतमा देखा पर्ने गरेको छ । अहिले मौसम परिर्वतनको समय भएकाले विशेष सतर्कता अपनाउन चिकित्सकले आग्रह गरेका छन् । मौसम फेरबदल हुँदा मौसमी फ्लू अर्थात मौसमी इन्फ्लूएन्जा स्वाइन फ्लूको खतरा हुने गर्छ ।
जोखिममा हुने समूह
यो रोगले बच्चा, युवा, बूढाबूढी सबैलाई रुघाखोकीले सताउने गर्छ। युवाको रोगसँग लड्ने क्षमता बढी हुने भएकाले अर्थात् उनीहरूको रोगप्रतिरोध शक्ति बढी हुने भएकाले यो रोगले युवालाई खासै असर गर्दैन। तर, यो रोग केही खास वर्गका व्यक्तिलाई भने बढी जोखिमका रूपमा लिने गरेको पाइन्छ। पाँच वर्षमुनिका बालबालिका, गर्भवती महिला, दमका रोगी तथा छाती र श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग लागेका एवं मुटु र मिर्गौलासम्बन्धी रोग लागेकालाई यो रोगले छिट्टै समात्ने तथा बढी खतरा रहने गरेको छ।
त्यसैगरी, मधुमेह भएका तथा एचआईभी एड्स रोग लागेकालाई पनि यो रोगले चाँडै पक्रन सक्छ। यी रोगबाट पीडित तथा बालबालिका र गर्भवतीको रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुने भएकाले जस्तोसुकै रोगले चाँडै समाउन सक्छ । यी समूहका मानिसले यो रोगमा हेलचेक्य्राइँ गरेमा मृत्युसमेत हुन सक्छ।
यस्ता छन् स्वाइन फ्लूबाट जोगिने उपायहरु
हिडडुल गर्दा मास्क लगाउने
बढि भिडभाडमा नजाने
रुघाखोकीका बिरामी भन्दा १ मिटर टाढा बस्ने, हात नमिलाउने
रुमालले नाकमुख छोपेर मात्र हाछ्युँ गर्ने
हात सफा गरिरहने
झोल पदार्थ धेरै खाने
ससमन बस्नेत ले नेपालको लागी ३ पदक थपे
तपाइ आफ्नो जिब्रोको स्वाद फेर्न, कुखुराको मासु खादैहुनुहुन्छ सावधान यो समाचार हेनुस !